Google Inotangisa Google Tag Manager | Martech Zone
Kana iwe wakamboshanda pane yevatengi saiti uye waifanira kuwedzera kodhi yekushandurwa kubva kuAdwords kuita template asi chete kana iyo template yakaratidzirwa iine mamwe maitiro, iwe unoziva iyo misoro yemaki yekumaka mapeji!
Matagi zvidiki zvidiki zvewebsite kodhi izvo zvinogona kubatsira kupa zvinobatsira mazano, asi iwo anogona zvakare kukonzera matambudziko. Mateki akawandisa anogona kuita kuti masaiti anonoke uye kuomarara; ma tag akaiswa zvisizvo anogona kukanganisa chiyero chako; uye zvinogona kutora nguva kune iyo IT department kana webmaster timu kuwedzera matsva-anotungamira kune akarasika nguva, yakarasika dhata, uye yakarasika shanduko.
Nhasi, Google yakazivisa Google Tag Manager. Ichi chishandiso chiri kuzogadzira mamaki emapeji zvakanyanya kuve nyore kune wese munhu!
Google Tag Manager maficha akanyorwa pane yavo saiti:
Kushambadzira agility - Unogona kuvhura ma tag matsva nekungodzvanya mashoma. Izvi zvinoreva kudzokororazve uye zvimwe zvinofambiswa nedata zviri pakupedzisira mumaoko ako; hapasisina mavhiki ekumirira (kana mwedzi) ekuvandudzwa kwekodhi webhusaiti-uye uchishaya wakakosha kushambadzira uye mikana yekutengesa mukuita.
Dhata yakavimbika - Google Tag Manager iri nyore kushandisa kukanganisa kukanganisa uye nekukurumidza kurodha tag kunoreva kuti iwe unogara uchiziva kuti tag yega inoshanda. Kugona kuunganidza data rakavimbika kubva kune yako webhusaiti uye ako ese maseru zvinoreva sarudzo dzine ruzivo uye zvirinani kuuraya mushandirapamwe.
Kurumidza uye nyore - Google Tag Manager inokurumidza, inonzwisisika, uye yakagadzirirwa kuti vatengesi vawedzere kana kushandura ma tag pese pavanenge vachida, uku vachipawo yavo IT uye webmaster vavanoshanda navo chivimbo chekuti saiti iri kufamba mushe-uye kurodha nekukurumidza-kuitira kuti vashandisi vako vasazombosiiwa vakarembera .
Tags: google tag manejaGoogle +Tagtag manejataggingTags
Gumiguru 3, 2012 pa 3:30 AM
Handisati ndamboedza iyi, uye ndangoinzwa kubva kwamuri. Ndatenda nekunongedza izvi, kumaka kunoita kuti zvive nyore pamapeji ese. Vanotangisa plug-in zvakare paWordPress yekumaka?
Gumiguru 3, 2012 na5: 03 PM
Ini handisati ndaona imwe, @disqus_FHwBYQKmUU:disqus asi hazvina kutora nguva kugadzira imwe!